Ogaden News Agency (ONA) – Sheekadii “Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga” oo toban sano ka dib Riwaayad laga dhigay iyo hadalkii Axmad Yaasiin
Sheekadii “Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga” oo toban sano ka dib Riwaayad laga dhigay iyo hadalkii Axmad Yaasiin
Posted by ONA Admin	/ November 5, 2013
Habeenimadii Jimcaha ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 01 November 2013, waxaa magaaladaLondonee carrigaUKlagu dhigay Riwaayad cusub oo loogu wanqalay “Aan Habee Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga”, taasoo si gaar ah u ruxday dareenka qof kasta oo daawaday, si dhab ahna u dhuuxay dulucdii ay xanbaarsanayd. Riwaayaddan, oo in muddo ah laga shaqaynayay, waxaa soo diyaariyay dhalinta OYSU ee dalka UK, kuwaasoo looga bartay inay bulshada u soo bandhigaan Riwaayado duluc-dheer oo raad gooni ah ku reebay bulshada Afsoomaaliga ku hadasha, gaar ahaan bulshada Soomaalida Ogaadeenya.
Dadwaynihii Riwaayaddan daawaday ayaa isku raacay inay ahayd mid dareen gooni ah xanbaarsan oo aad mooddo inay qof walba gaar ahaantiisa u taabatay. Waxay dadku isla qireen in qaabka la isugu soo dubba-riday iyo sida loo jilayba ay ahaayeen kuwo aad iyo aad loo dareemay fariintii ay xambaarsanayd.
In kastoo ay Riwaayaddu murtida iyo madadaalada la wadaagto Riwaayadihii horee ay dhalintu horay u dhigeen, haddana waxaa qiimaheeda kor u sii qaaday sheekada ay ku salaysan tahay, oo ah sheeko ku socota gabadh da’yar oo loo gaysanayo dulmi xad-dhaaf ah oo u horseedaya inay dhex-jibaaxdo nolol qallafsan oon lahayn yididiilo lagu hirto.
Riwaayaddan, sida magaceedaba ka muuqda, waxaa lagu saleeyay sheeko lagu magacaabo “Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga” oo aan toban sano ka hor curiyay. Haddaba waxa la iga soo codsaday inaan wax yar ka ifiyo heerarka ay sheekadaasi soo martay ilaa intay Riwaayad ka noqonaysay.
Sheekada “Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga” waxay ka warramaysaa dhacdo si dhab ah u dhacday, mana aha sheeko la iska mala-awaalay. Waxaa shaqo-maalmeedkayga ka mid ahaa inaan isku dubba-rido xogaha iyo wararka ka yimaadda Ogaadeenya oo aan ka diyaariyo warar iyo maqaallo warbaahinta loo adeegsado. Waxaa markaas si gaar ah ii taabatay sheekada gabadh yar oo ka mid ah dadkii ay ciidammada gumaysigu dhibaateeyeen ee xogohooda la ii soo gudbiyay. Aad ayaan arrinteeda uga murugooday, waxaanan is-waydiiyay waxa aan u qaban karo.
Markii aan muddo isla shawrayay, waxaan gar-waaqsaday in dhibaatada noocaas ahi ayna gabadhan yar ku ekayn, balse ay jiraan gabdho badan oo dhiggeeda ah oo dhibaatooyinkan iyo kuwa ka daran loo gaystay, sidaas darteed waxaan go’aansaday inaan qisadeeda ka sameeyo sheeko taaban karta dareenka qof kasta oo akhrista.
Sidaas darteed waxaan curiyay sheekadan markii ay taariikhdu ku beegnayd 18 July 2003, waxaanan u doortay magacan, oo aan is-leeyahay w aa mid ka yaabin kara qofka marka ugu horraysa ee uu daalacdo, laakiin haddii uu sii dhuuxo, wuxuu dareemayaa in macno wayni ka denbeeyo.
Waxyaabaha aan sheekadan sida gaarka ah ugu xusuusto waxaa ka mid ah, markii la daabacay ayaa waxaa ila soo xidhiidhay mid akhristyaasha ka mid ah, oo ii sheegay inuu shan mar oo kala duwan sheekada akhriskeeda billaabay, laakiin aanuu marna dhammaynin, sababtuna ay tahay iyadoo uu dareenkiisu is-beddalayo oo Ilmo aanuu xakamayn karin ay ka soo daadanayso, ka dibna uu akhriska joojinayo.
Waxaan u sheegay inaan aniga laftaydu la qabo dareenka noocaas ah, laakiin ayna ujeeddadaydu ahayn inaan ka oohiyo, balse ay ahayd inaan u sawiro heerka ay gaadhsiisan tahay dhibaatada dadkeena lagu hayo ee loo baahan yahay inaan ka dhiidhino oon ka dagaallano.
Sheekada “Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga” waxay noqotay mid duugoobi wayday, dhacdada ay ka xog-warramaysana waxay wali deris la tahay dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya, sidaas darteed waxaa muddo hadda dhawr sano laga joogo lagu taliyay in filin loo beddalo. Waxaa la diyaariyay siinaaryihii iyo qaabkii filinka loo soo saari lahaa, waxaana loo hawlgalay sidii filinkaas loo samayn lahaa, hase yeeshee waxaa soo baxay duruufo dib-dhac ku keenay soo saarista filinka.
Markaas ayay dhalatay fikradda ah in Riwaayad laga dhigo. Dadaal badan iyo is-xilqaan ay sameeyeen dhalinyarada OYSU eeUK, ayaana suurageliyay in si heer sare ah Riwaayaddan loo sameeyo oo qisada ay xanbaarsan tahay lagu soo bandhigo murti xeel-dheer oo si wanaagsan loo falkiyay.
Waxaan ka mid ahaa dadwaynihii daawanayay Riwaayadda “Aan Habee Hooyo Miyaan Odhan Karaa Ilmahayga”, waxaanan la wadaagay dareenka midabbbada badan leh ee Riwaayaddu ay ku beeraysay dadka daawanayay, oo mar murugoonayay, marna cadhoonayay, marna ciil-baxayay, marna ku siganayay inay badaha jacaylka ku dhex fakadaan. Laakiin aniga waxaa ii dheeraa iyadoo sheekadani ay i dugsanaysay tobankii sano ee la soo dhaafay, bale ay caawana heshay dar kaloo ila wadaaga.
Halkan ka akhri Khudbadii mudane Axmad Yaasiin uu daawadayasha ugu talagalay: